EX - ABSDF: ဆရာ…ဒဂုန်တာရာမမှားပါဖူး…….
ဘယ်သူကိုမှ သာစေ ၊ နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါကြောင်းကြိုတင် အသိပေးပါရစေ……
သဘောတရား ..ကို..ဖြစ်စေ…(လူ) တွေ..နာလည်ရာမှာ …
မိမိစည်းပူးထားတဲ့… စွမ်းအား (Capacity) အရပဲ… နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ဟိုး..အဝေးက အရာတစ်ခုကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါ…..
မှန်ဘီလူးဆိုတာ….( အသိ ) စွမ်းအား Capacity နဲ့..ပညာ နဲ့အတူတူပါပဲ
ထို့နည်း၎င်းပဲ ၊ ညအခါမှာ မိုးကောင်းကင်ကို..မော့ကြည့်လိုက်ပါ…..
ကြယ်ပေါင်း..ကုဋေကဋါ ပါဝင်သော ကြယ်အစု..Galaxy လည်းဖြစ်နိုင်သလို….
မရေတွက်နိုင်လောက်တဲ့ ..ကြယ်အစုပေါင်း..Cluster of galaxies လည်း..ဖြစ်နိုင်ပါသည်…..
အားပြင်းသော telescope မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည်မှသာ …ခွဲခြား သိမြင်နိုင်ပါသည်….
ထို့ကြောင့်…telescope နှင့်…တူ..သော Capacity စွမ်းအား..နှင့်..
ဒီကနေ့….ခေတ်စား…နေတဲ့ “ဒီမိုကရေစီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကိုပဲ
လူအမျိူးမျိုးက…. မိမိ၏နောက်ခံ..Capacity .အပေါ်..မူတည်ပြီး…
အကြောင်းက…လေ့လာမှုအား ဘ၀အတွေ့အကြုံ…နဲ့ …လည်းဆိုင်မယ်လို့.ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်….
ကိုထွန်းအောင်ကျော်..ရဲ့… (အသိ) က…သာမာန်..လူအများ..သိ..ကြတဲ့ ..အသိ..ဖြစ်တယ်..
ကိုထွန်းအောင်ကျော်…နားလည်တဲ့..ဒီမိုကရေစီ….က နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ပြည်သူလူထုက …(လူ) တဦးမဲတပြား နဲ့..ရွေးချယ်တဲ့..ဒီမိုကရေစီ…လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီ
ကွန်မြူနစ်စနစ်..ဆိုတာက…တပါတီအါဏါရှင်စနစ် …. ဒါကြောင့် (မဲ) နဲ့ရွေးခွင့်..ပေးတဲ့..ဒီမိုကရေစီ… ဆိုတာ…နဲ့ လားလားမှ..မဆိုင်… လို့..ကိုထွန်းအောင်ကျော်က..ထင်နေပုံ..ရတယ်…
“ဒဂုန်တာရာကိုလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်ကိုသူလိုသလိုဆွဲပြီး "ဒီမိုကရေစီကွန်မြူနစ်စနစ်" လို့ပြောလိုက်တာတော့အတော့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သွားပြီ၊
ဒီအရေးအသားမှာ..ရှင်းသွားးပါပြီ…ဘုန်းကြီး..နဲ့..ဘီး…လို..တပါတီအာဏါရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့..ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ ပြည်သူကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့ ….ဒီမိုကရေစီ ..လားလားမှ…မသက်ဆိုင်..နိုင်ပါ….
ထို့ကြောင့်..ဆရာဒဂုန်တာရာ…က “ဒီမိုကရေစီကွန်မြူနစ်” လုိ့..ပြောတာကို..လက်မခံ..နိုင်တဲ့..အဖြစ်ပါ။
နိုင်ငံရေး အသုံးအနှုန်း နှင့် နိုင်ငံရေးသဘောတရား…..
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာရော ကွန်မြူနစ်..ဆိုတာတွေဟာ…နိုင်ငံရေး..အသုံးအနှုံးတွေဖြစ်ကြပါတယ်
ဒီ နိုင်ငံရေးအသုံးအနှုံးးတွေ နောက်မှာ (နိုင်ငံရေးသဘောတရား) တွေရှိပါတယ်….
သူတို့ရဲ့ .(အနှစ်) အဓိပ္ပါယ်ကို..နက်နက်နဲနဲသိနိုင်မှာပါ…..
ဒီမိုကရေစီ….ဆိုတာက..ဂရိ စကားက မြစ်ဖျားခံလာတဲ့…စကားပါ…..
ဂရိစကားလုံး δῆμος (dêmos) "people" နဲ့ κράτος (kratos) "power" or "rule" ဆိုတဲ့ စကားလုံး..(၂) လုံးကိုပေါင်းမိပြီး ၊ ဂရိလို δημοκρατία (dēmokratía) "rule of the people", လို့အဓိပ္ပါယ်ရတပါတယ်။ ဒီ (ဒီမိုကရေစီ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဂရိ..တွေက (၅)ရာစု ဘီစီ ကစပြီး..ထိုစဉ်ကတည်ရှိနေတဲ့ (နိုင်ငံ ရေးစနစ်) ကို ဦးတည်ခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ထိုစဉ်က City State လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းပြည် ပမာကြီးထွားတဲ့ မြို့ကြီးတွေရဲ့ (စနစ်) ၊ အထူးသဖြင့် (အေသင်) က စနစ် ကိုရည်စူးကြတာပါ။
ဒီမိုကရေစီ (စ) ခဲ့တဲ့ ဂရိတွေခေတ်က ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ယနေ့ကျင်သုံးနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခြင်းတောင်.. မတူညီ. .ကြတော့ပါ…ဂရိခေတ်..ဒီမိုကရေစီက ..ဗမာတွေ..ရေပေါ်ဆီ လို့ဘာသာပြန်ကြတဲ့..Elite Class လူတွေပဲ.. နိုင်ငံသား Citizen ဖြစ်ခွင့်ရှိတာမို့… (မိန်းမ) တွေ..(ကျွန်) တွေ..ပါခွင့်..မရှိဖူး….တချို့က .. အာလုံးပါအောင်… အမတ်တွေကို..အလှည့်ကျ..လုပ်စေတယ်….
ဒီမိုကရေစီဟာလည်း…. Evolution လို့ခေါ်တဲ့…ဖြေးဖြေးချင်း…တိုးတပ်ပြောင်းလဲ..လာရတာမို့…ယနေ့ ဒီမို ကရေစီ ဆိုတာ အရွယ်ရောက်သူ..(လူတိုင်း) ပါဝင်တဲ့..(နိုင်ငံသား)တိုင်း (မဲ)ပေးနိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ (စနစ်) အဖြစ် တိုး တက်ပြောင်း လဲ လာပြီလို့..ပြောနိုင်ပါတယ်။
အမှန်က..ဒီမိုကရေစီ..ဆိုတာ..ရွေးချယ်တဲ့..စနစ်ကိုသာ ..ပြောတာပါ….တကယ်တော့..လူတွေ..အဖျားစွပ် ခေါ်ကြတဲ့..ဒီမိုကရေစီ…ဆိုတာ .. Representative ..ကိုယ်စားပြု…ဒီမိုကရေစီကို ခေါ်တာပါ….လူတိုင်း.. ပါဝင်ဖို့ရာ …မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်..မိမိကိုကိုယ်စားပြုမဲ့သူ..ကိုရွေးတဲ့ …ရွေးကောက်ပွဲ..စနစ်..ကိုခေါ်တာပါ… ဒီစနစ်မှာပဲ..သမ္မတအုပ်ချုပ်တဲ့ ..Republic..စနစ်လား… ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ …စနစ်လားဆိုတာ. .ကွဲသွားပြန် ပါတယ်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ..စနစ်ဆိုတာ …လူထုကိုကိုယ်စားပြုမဲ့ …(အမတ်) တွေ..ရွေးပြီး… အမတ်.. အများဆုံးရတဲ့..ပါတီက…အစိုးရဖွဲ့ခွင့်..ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ..စနစ် ကို (Majority Rule) အများအုပ်ချုပ်သောစနစ် ဟုခေါ်ပါသည်။ အမတ်ဖြစ်မှ..အစိုးရ..အဖွဲ့ထဲ..ပါဝင်ခွင့်.. ရပါမယ်။ အနိုင် ရတဲ့ ပါတီက အမတ်တွေကပဲ..တခါ..၀န်ကြီးချုပ်ကိုရွေးရပါတယ်။
အမေရိကန်..စနစ်မှာကြတော့..အုပ်ချုပ်ရေး..အတွက်.. သမ္မတ (တိုင်းပြည်)..နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ပြည်နယ်) တွေကို ရွေးချယ်ရပေမဲ့…သမ္မတ ဟာ အာဏါရှင်..မဖြစ်သွားစေဖို့ Check and Balance လို့..ခေါ်တဲ့ အပြန် အလှန်အာဏါကိုထိန်ပေး..တဲ့ စနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ရာ….ကမ္ဘာမှာ.. နံမည်ကျော်ခဲ့ရ ပါတယ်… အမေရိကန် စနစ် မှာ အုပ်ချုပ်ရေး (သမ္မတ) ၊ ဥပဒေပြုစုရေး (legislative) ၊ တရားရေး (Judicial) တို့ကို (တူညီသောမဏ္ဍိုင်) တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ..အချင်းချင်း..အပြန်ပြန်..အလှန်လှန်..ထိန်းကွပ်..သောစနစ်ဖြစ်သည်…အုပ်ချုပ်ရေး .. ဆိုတာ …ဘယ်စနစ် မှာပဲ..ဖြစ်ဖြစ်..နောက်ဆုံး..ထိပ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ..လာဖြစ်ကြတာပါပဲ.. (တြိဂံ)..Pyramid ပုံသဏ္ဍန်လာဖြစ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ထိပ်ဆုံးလူ…အာဏါရှင်..မဖြစ်ရအောင်… ပြန်ထိန်း မဲ့ စနစ်ကိုစဉ်းစားကြရသည်ကိုး…..
ယနေ့ခေတ်မှာတော့… Representative ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီအောက်မှာ ..အများစု..က စီးပွားရေးစနစ် မှာ … အရင်းရှင်စီးပွားရေး စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး လွပ်လပ်မှု ရရှိစေဖို့…လူသားချင်းစာနာတဲ့ Human Rights စသည်တို့ကို အခြေပြုတဲ့…Liberalism.. လစ်ဖရယ်စနစ်..တို့ကိုကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Representative Democracy – Capitalism – Liberalism တို့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ (စနစ်) ကို လွယ်လွယ် လစ်ဖ ရယ်ဒီမိုကရေစီ..လို့နားလည်..လိုက်ကြပါတယ်…
အရင်းရှင်..စီးပွားရေးက လူတန်းစေ့..နေနိုင်တဲ့ ချမ်းသာမှုကို Middle Class ကိုဖေါ်ပေးတယ်
လစ်ဖရယ်ပေါ်လစီက..လူ့အခွင့်အရေး ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ၊ လွပ်လပ်ခွင့်တွေကိုဖေါ်ထုတ်ပေးတယ်
ဒါကြောင့် ကိုတွန်းအောင်ကျော်က ….
တနည်းအားဖြင့် ကိုထွန်းအောင်ကျော်..ဖေါ်ပြနေတဲ့..ဒီမိုကရေစီက လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီကိုညွှန်ပြနေတာပါ
တမျိုးထဲ မက ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ….
၂၁ ရာစုနှစ်မှာ..ဒီမိုကရေစီ ဟေ့..ဆိုလိုက်ရင်..အများ..နားလည်တာက..ခေါင်းထဲရောက်..သွားတာက.. အများလက်ခံကျင့်သုံးကြတဲ့….ကိုယ်စားပြု (Representative) ဒီမိုကရေစီပါ….
ကိုယ်စားပြု (Representative) ဒီမိုကရေစီ အပြင် Participatory Democracy..ပါဝင်မှု ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာရှိပါသေးတယ်….
သူလည်း ပေါ်ခဲ့တာကြာပေမဲ့.. လူတိုင်း..ပါးစပ်ဖျားမှာ..ရေပန်းစား..လောက်အောင်…နံမည်မကြီးခဲ့ရှာပါ။
သို့သော်… Participatory Democracy က သမရိုးကျ representative democracy ထက် ပြည်သူတွေပါဝင်အောင် ကြိုးစားမှု ရှိတယ်လို့ပြောလို့ ရပေမဲ့ လက်တွေ့ မကျတာတွေရှိပါတယ်။
ဥပမာ Occupy Wall St ဆိုတဲ့ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ…အဆုံးဖြတ်တွေမှာ… လူအားလုံးပါရမယ်ဆိုတဲ့.. စေတနာ..နဲ့ ..လူအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့..စနစ်.. Participatory Democracy ကိုကျင့်သုံးခဲ့ ကြတယ်။ ပြဿနာက..မနေ့ကလာတဲ့သူက…ယနေ့မလာတော့..အဆက်အစပ်..မရှိ..ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း. .မသိ..နောက်..လူတိုင်းရဲ့..(အသိ) စွမ်းအားက ..တူကြတာမှ..မဟုတ်…သူပြောတာကိုယ်နားမလည်… ကိုယ်ပြောတာ..သူနားမလည်..နဲ့… ကြပ်အေးသူ့အမေရိုက်…ရှုပ်ထွေးကုန်ရော…
Participatory Democracy ကိုတကယ်..နားလည်..တာက..လီနင်…
လီနင်ရဲ့ Participatory Democracy အကြောင်းပြောရင်…ကွန်မြူနစ်..ဆိုတာကိုပြောရတော့မယ်…
ကွန်မြူနစ်..ဆိုတာက… နိုင်ငံရေးအသုံးအနှုန်း…စကားလုံး…ဒါပေမဲ့..နိုင်ငံရေး…သဘောတရား..တွေအများ ကြီး..ပါလာ ပါတယ်…လေးလေးနက်နက်..လေ့လာ…လေးလေးနက်နက်တွေး..လေးလေးနက်နက်ရေးရင်…စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သွာ..နိုင်ပါတယ် ….
ဒါက ကွန်မြူနစ်..စနစ်ကို ကျကျနန လေ့လာရင်ပေါ့…Karl Marx နဲ့ Engels ၊ လီနင် ၊ စတာလင် ၊ မော် ၊ ကြောစကီး တို့ရဲ့..မူရင်းကျမ်းပေါင်းမြောက်များစွာ ကိုဖတ်ရတော့မယ်။ ဆုံးမှာမဟုတ်ဖူး…
ဒါကြောင့် အကျဉ်းခြုံးပြီ. ..အုပ်ချုပ်ပုံ..အနှစ်ကို..ပြောရရင်…. ကွန်မြူနစ်စနစ် ရဲ့ အခြေခံ..အနှစ်တစ်ခုက ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင်စနစ် Dictatorship of the Proletariat ကိုထူထောင်ရမယ်။ ဒါမှ ဒီအာဏါကိုသုံးပြီး .. အရင်းရှင်တွေရဲ့ လုပ်ငန်း နဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ တွေကို (ပြည်သူပိုင်) သိမ်းပြီး…ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး..ရဲ့ အရင်း အနှီးးတွေကို..ထူထောင်နိုင်မယ်။ ဒီလို..ဆိုရှယ်လစ်အရင်းအနှီးတွေကို ထူထောင်ပြီး.ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကို ကျော်ပြီး..စီးပွားရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး..အောက်ခြေ အဆောက်အအုံ.. Infrastructure တွေကို..တည်ဆောက်ထူ ထောင်ပြီးမှ….လူတွေလည်း..စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းမြင့်လာ…စီးပွားရေးဆောက်အအုံတွေ လည်း.တည် ဆောက်ပြီးမှ… မိမိလုပ်အားရှိသမျှလုပ်ကြပြီး…လိုအပ်သမျှသာ သုံးစွဲကြတော့မယ်…(ဘုံဘ၀)..(ဘုံနိဗ္ဗန်) စီသို့ ချီတက်ကြမယ်လို့..ကာလ်မာ့က်စ် တို့က (စိတ်ကူးယဉ်) ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကို Communist Utopia လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒါတွေကို အသေအခြာ..နားလည်ဖို့..Full Context လို့ခေါ်တဲ့..အစအဆုံးနားလည်ဖို့..လိုအပ်လာပါတယ် ကြားဖြတ်ပြီး…မိမိနားလည်ချင်သလို…နားလည်လို့..မရပါ….
Communists Utopia ဆိုတာက ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကိုရောက်..ကျော်ပြီးမှ ကွန်မြူနစ်ခေတ်ကိုရောက်မှာ… ကွန်မြူနစ်နိဗ္ဗန် ကိုရောက်ရမည်ပါ….
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ … မာ့က်စ်က.. From each according to his ability
လို့ဆိုခဲ့တယ်၊ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ဥါဏ်စွမ်းရှိသမျှ အလုပ်လုပ်ကြပြီး…မိမိလုပ်သမျှ..ခံစား..နိုင်သေးတယ်
ကွန်မြူနစ်ခေတ် ၊ ကွန်မြူနစ်နိဗ္ဗန်ရောက်တော့…
ဘ၀ရောက်သွားရပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်ခေတ်ရောက်မှ…မိမိစွမ်းအားရှိသမျှ ..လုပ်ကြပြီး..(မိမိလိုသမျှ) ကိုပဲ ရယူကြတော့မယ်….ဒီအဆင့်ကိုရောက်မှ… စီးပွားရေးအရလည်း.ပြည့်စုံ..လူတွေရဲ့..အတွေအခေါ်ကလည်း .မြင့်မား..လာတဲ့အခါမှာမှ…အစိုးရဆိုတာလည်း..မလိုတော့…အချင်းချင်း..ထိန်းသိမ်းနေထိုင်သွားမဲ့ကွန်မြူ နစ်နိဗ္ဗန် (Utopia) ကိုရောက်ရမှာပါ။ ဒီ..utopia ရောက်ဖို့.. အားလုံးပြည့်စုံ..လာရမှာပါ….
ဒီအရေးကြီးတဲ့ ကွန်မြူနစ်သဘောတရားတွေကို လူအများစု က မလေ့လာကြပဲ ၊ ဟိုကြားဒီကြား ၊ သူတပါး ပြောတဲ့ စကား ၊ အသုံးအနှုံးတွေကို ၊ ကြားပြီး မိမိတို့ သဘောပေါက်ချင်သလိုသဘောပေါက်လိုက်ကြ တယ်။ ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရကိုဝေဖန်ရင်း ၊ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာ သင်တန်းတက်ခွင့်ရတော့ ၊ မိမိအကျိုးအတွက် (ခုံချ) လိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင် ၊ ယူတိုးပီးယား..ဆိုတာနဲ့ ၊ အစိုးရ မရှိတဲ့ ရပ်ကွက်အဆင့် utopia ကိုလိုလားတယ်ဆိုပြီး ထအော်ပစ်လိုက်တယ်။တကယ်နားလည်တဲ့သူအဖို့ ၊ မာ့က်စ်ပြောတဲ့ utopia နဲ့ သူ့ရဲ့ utopia ကဘာမှ မဆိုင်ဖူး။ သူက နားမလည်ပဲ ရေပေါ်အရုပ်ရေးချင်တာ။ မာ့က်စ်လို စနစ်တကျ မရှိရင် utopia တော့ မရ ၊ မင်းမဲ့စရိုက် Anarchists တွေပဲရပြီး ၊ တိုင်းပြည်ပျက် မှာပေါ့။ ဒီဒါရိုက်တာကြီးကပဲ ၊ အင်ဒီရာဂန္ဒီဆိုတာ အိန္ဒြိယ နဲ့ ဂန္ဒီကြီးတို့ကိုပေါင်းမှဲ့ ထားတာဆိုပြီး ၊ လူသိရှင် ကြားအင်တားနက် မှာ တက်ရေးပြီး ၊ ဖြီးခဲ့ဖူးတယ်။
အောက်စီဂျင်နဲ့ ဆရာကြီးကလည်း Marxism ဟာ အာဏါရှင် မဟုတ်ပါဖူးလို့ လူငယ်လေးတွေကိုဖြီးတယ်။
ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင်စနစ်ကို မထူထောင်ပဲ ၊ အသုံးမပြုပဲ ၊ ဘယ်လို အရင်းရှင်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူ ပိုင်သိမ်းမှာလည်း ၊ မာ့က်စ်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ နင်းပြားပစ္စည်းမဲ့တွေ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှု ကိုဘယ် လို အဆုံးသတ်မှလဲ။
ပစ္စည်မဲ့အာဏါရှင်စနစ် ဆိုတာ မ့က်စ်ဝါဒ ရဲ့ ၀ရဇိန်လက်နက်ကြီး။ ဒီလက်နက်ကြီး မပါပဲ မာ့က်စ်မျှော်မှန်း တဲ့ ဘုံဘ၀ ကိုဘယ်လိုရောက်နိုင်မှာလဲ။ မာ့က်စ်ဝါဒဆိုတာ နိုင်ငံရေးသဘောတရားတခုပဲမဟုတ်။ စီးပွားရေးမှာပါ မာ့က်စ်စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးရမှာ။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့ (အနှစ်) ကိုမှားတယ်ဆိုတာ တခုပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အောက်စီချင်ဆရာကြီး ကွန်မြူနစ်စနစ် ဆိုတာကို ဖြီးပီး နားလည်တာ။ မာ့က်စ် ၊ အိန်ဂျယ် ၊ လီနင် ၊ မော် တို့ရဲ့ (ပင်ရင်းကျမ်း) (Classic Original Writings) တွေကို (မဖတ်) ဖူးလို့ပဲ။ ဖတ်ပြီးနား မ လည် ရင် တောင် ၊ ဒါအရေး ကြီးတယ်ဆို တာကို (သိ) ကို (သိ) ရမယ်။
စောစောပိုင်း ၁၈၄၄ လောက်ကတည်းက မာ့က်စ်က သူမျှော်မှန်းတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ကိုရောက်ဖို့ ပစ္စည်းမဲ့ တွေဟာ နိုင်ငံရေးအာဏါကို သိမ်းရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ ၁၈၅၀ မတ်လမှစတင်ထွက်လာတဲ့ မာ့က်စ် ရေးတဲ့ “The Class Struggles in France 1948-1850” ဆိုတဲ့ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွေမှာ မာ့က်စ် ကဒီ “ Dictatorship of the proletariat” ကိုစသုံးလာတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မာ့က်စ် တို့ မျက်စိထဲမြင်နေတာ က ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးက (Paris Commune) ပုံသဏ္ဍန်ကိုပဲ မြင်နေတာ။ မာ့က်စ်တို့က လက်တွေ့တော် လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ဖူးကြတာမှမဟုတ်။ စိတ်ကူးထဲ မှာ တော်လှန်ရေးအကြောင်းရေးနေရတာကိုး။
တကယ်လက်တွေ့ဦးဆောင်ပြီး ၊ တကယ့်လက်တွေ ပြဿနာတွေကို ကျော်လွှားရတာက လီနင်။ ဒါကြောင့် လီနင်က ပစ္စည်းမဲ့တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ရမဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမယ်၊ဆိုတာကိုချပြခဲ့တယ်။ ၁၉၀၂ လီနင်ရဲ့ “What is to be done” (ဘာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲ) ဆိုတဲ့ စာတမ်းမှာရေးပြခဲ့တယ်။ လီနင်ရဲ့ “Democratic Centralism” (ဗဟိုဦးစီးစနစ်) မှာ ပါတီတွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် လွပ်လွပ်လပ် ငြင်းဆိုနိုင်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီကျတယ် ဆိုတာ ဒီကလာတာ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီးရင်တော့ အများဆုံးဖြတ် ချက်အတိုင်းလိုက်နာကြရတော့မယ်။ (ဗဟို) ဆိုတာက ဒီကလာတာ။ ဗမာကွန်မြူနစ်တွေသုံးတဲ့(ပါတီလိုင်း) ဆိုတာဒီကလာတာ။ မျှမျှတတပြောရရင် ၊ သခင်ဗသိန်းတင်ဦးစီးတဲ့ အနောက်မြောက်ဗဟိုမှာ ပါတီအတွင်း မှာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးခွင့်ပေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ “ထို့ကြောင့်ဤသို့” မှာလည်းပါပါတယ်။
လီနင်တို့က လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီကို အရင်းရှင်တွေကို အကျိုးပြုတဲ့ (ဗူဇွာ) ဒီမိုကရေစီလို့ယူဆတယ်။ ဒါ ကြောင့် ကိုယ်စားပြု Representative ဒီမိုကရေစီကို လက်မခံဖူး။ ဒါကြောင့် အများပါဝင်နိုင်တဲ့ Participa –tory ဒီမိုကရေစီကိုရွေးခဲ့တာ။ လီနင်ရဲ့ အတွေးက အာဏါဟာ အများပါဝင်ခွင့်ရအောင် ၊ မျှတအောင် (ပါတီ ဗဟို) မှာတည်ရှိရမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ပေါ်လစီတွေဟာ ဒီမှာရှိရမှာ။ ဒီပါတီအဖွဲ့အစည်း မဆုံမိတဲ့ ကြားအ ချိန်မှာ ပါတီဗဟို ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချဖို့ (Polit Bureau PB) ကိုကြားခံပေးရတာ။ လီနင် ရဲ့စေတနာ ဟာ မမှားပါဖူး။ မာ့က်စ်တို့ လီနင်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ အာဏါရှင်စနစ်က (လူ) တဦးတစ်ယောက်အတွက် (အာဏါရှင်) မဟုတ်ဖူး။ ပစ္စည်မဲ့လူတန်းစားအတွက် အာဏါရှင် ကိုရည်စူးကြတာ။ ဒါပေမဲ့ (စတာလင်) က အာဏါကို သိမ်းပိုက်လိုက်တော့ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ အာဏါရှင်စနစ်ဆိုတာ ၊ နောက်ဆုံးတော့ (လူ) တဦးရဲ့ သက်ဦးဆံပိုင်အာဏါရှင် စနစ်နဲ့ အဆုံးသတ်ရတာပဲ။ စတာလင်ရဲ့ ပုံစံကို ပါတီတိုင်းက လိုက်အတုခိုးရတော့ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ ပစ္စည်မဲ့အာဏါရှင်စနစ် ရေစုံမျှောပြီး နံမည်ပျက်ရတာပဲ။
ဒါကြောင့်တိန်လျှောက်ပိန်တို့ က လူတဦးတစ်ယောက်ထဲ အာဏါ ကနေ ပါတီကဦးဆောင်တဲ့ Collective Leadership အများကဦးဆောင်တဲ့ စနစ်ကို ပြောင်းရုံမက ၊ ပါတီကရွေးပြီး ခေါင်းဆောင်ပြောင်းတဲ့ စနစ်ကို Institutionalized လုပ်ခဲ့တာ။ တိန်လျှောက်ပိန်က (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပါတီကွန်ကရက်အတွက် ကျောက်စီ ယန်း က အစီရင်ခံစာရေးတော့ တိန်လျှောက်ပိန်က သူ့တပည် ကို (အမေရိကန်) တွေရဲ့ “Separation of Powe” တွေမပါစေနဲ့လို့ အသေအခြာမှာတာ။ ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ အဲဒီလောက် လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီကို မုန်းတာ။ (Prisoner of the State by Zhao Zhiyang စာ (၂၀၈)။
မာ့က်စ်တို့က ပစ္စည်မဲ့အဏါရှင်စနစ်ကို တွေးရုံသာတွေးခဲ့တာ လီနင်က မှ ဗဟိုဦးစီးစနစ် နဲ့ ပုံဖေါ်ပေးလိုက်မှ ပြီးပြည့်စုံလာတဲ့ အတွက် Marxism-Leninism မာ့ကစ်ဝါဒ လီနင်ဝါဒ ပေါင်းမှ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ရတာပါ။ ဦးနေ၀င်း မဆလကို ဗဟိုဦးစီး စနစ်နဲ့ သွားမယ်ကြေငြာလိ်ုက်တော့ ဗမာကွန်မြူနစ်တွေ ငါတို့ခေတ်ရောက် ပြီ ဆိုပြီး အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာကြတယ်မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာကို အလေးအနက်ထားရင် ၊ ၀ါဒတွေကို စိတ်ဝင်စားရင် ၊ နိုင်ငံရေး အသုံးအနှုံး တွေကို သဘောပေါက်ရင် နားလည်မှု မမှားနိုင်တော့ဖူးပေါ့။ ဟိုကြားဒီကြား စကားတွေကို အပေါ်ယံကြော နားလည်ပြီး ဖြီးကြတာ ဗမာတွေရဲ့ ဓလေ့လိုဖြစ်နေတယ်။ အောက်စီဂျင်နဲ့ဆရာကြီး က မာ့က်စစ်ဝါဒဟာ အာဏါရှင်မဟုတ်ပါဖုး ၊ ဒါရိုက်တာကြီးက ရပ်ကွက် Utopia ဆိုပြီးထအော်နေသလိုပေါ့။
Marxism ကို လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီ ဘောင်ထဲက သွားမယ်ဆိုရင် Browderism ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ပြဿနာက Marxist Economy ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ ပြည်သူပိုင်သိမ်းရင် ဘယ်အာဏါ နဲ့ ဘယ်လိုသိမ်းမှာလည်း။ ဒါတွေ ကို နားလည်ဖို့ မာ့က်စ် ၊ လီနင်တို့ရေးတဲ့ အရင်ကျမ်းတွေကို ဖတ်မှ နားလည်နိုင်မှာ ၊ စဉ်းစားနိုင်မှာ။
နိုင်ငံရေးမှာ အခေါ်အဝေါ် တူပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ လွဲတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ လီနင်က New Economic Policy ကိုရွေးတော့ တချို့က State Capitalism လို့သုံးဆွဲကြတယ်။ အခု တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ တိန်လျှောက်ပိန်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးပေါ်လစီကို လည်း State Capitalism လို့ခေါ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်ချင်း လုံးဝမတူပါ။ ထို့နည်းတူ Leon Trotsky ရဲ့ Permanent Revolution နဲ့ မော်စီတုန်း ယဉ်ကျေးမှုတော်လန် ရေးမှာ ပြောခဲ့တဲ့ Permanent Revolution ဟာ သဘောသဘာဝချင်း တူမှမတူကြတာ။ စာရေးသူ သိချင် စိတ်ကြောင့် (၃)ရက်တိတိ ဘာမှာ မလုပ်ပဲ ဒီ Subject ကိုပဲ research လုပ်ခဲ့ရတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ အပြင် Complex ဖြစ်တယ် ၀ါဒရေးတွေပါလာတော့ သိမ်မွေ့တယ်။
ဒါကြောင့် ဒဂုန်တာရာ ၊ “ဒီမိုကရေစီကွန်မြူနစ်” လို့သုံးတာ မှားတယ်လို့ပြောလို့ မရပါ။
ကွန်မြူနစ်စနစ်ဟာ အာဏါရှင်စနစ်မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပစ္စည်းမဲ့တွေက အာဏါသိမ်းရမယ်လို့ ဆိုတာပေါ့။ ဒါကြောင့် လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်လို ပြည်သူတွေကို မိမိကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အစိုးရ ကို မိမိ ရဲ့ မဲတပြား နဲ့ ရွေးချယ်ခွင့် ပေးသည့် စနစ်မဟုတ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီကသာ ထောက်လျှောက် အုပ်ချုပ်သွားမှာ။
သို့သော် ၊ ကွန်မြူနစ် ဗဟိုတွင်တော့ Participatory ဒီမိုကရေစီကို ဆုံးဖြတ်ချက် မချမှီ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ကျင့်သုံးခွင့် ရှိသည်။ ဒါကို တချို့က “ပါတီအတွင်း ဒီမိုကရေစီ” ဟုခေါ်ကြသလို တချို့က “ကွန်မြူနစ်” ဒီမိုကရေစီ ဟု ခေါ်ကြသည်။ လီနင်ကိုယ်နှိုက်က သူတို့ ဒီမိုကရေစီမှ အများအတွက်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီ ၊ ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီ သည် လူထုအတွက် မဟုတ် ဗူဇွာတွေအတွက်သာဖြစ်သည် ဟု..ယုံခဲ့ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ “Rule of the people”။ ကွန်မြူနစ်တွေအဖို့ သူတို့ဟာ ပြည်သူတွေ အတွက် တော်လှန်တာလေ။ ဒါကြောင့် သူတို့အတွက် ပြည်သူတွေအုပ်ချုပ် တဲ့ ဒီမိုကရေစီပေါ့။
တရုတ်နဲ့ ရုရှားကွဲကြတော့ ၊ တရုတ်တွေက အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီလည်း မဟုတ်၊ ရုရှားတို့ကျင်သုံးတဲ့ ဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ် ၊ မော်စီတုံးရဲ့ “Bloc of Four Social Classes Theory” ကို အခြေ ခံတဲ့ “ဒီမိုကရေစီအသစ်” ဆိုပြီးတစ်စထန်းထ ကြပြန်တယ်။
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာလည်းသေသွားပါပြီ။ သို့သော် စာရေးသူ ဒဂုန်တာရာကို လေးစားရသည်မှာ ကွန်မြူနစ် တွေနဲ့ အနေနီးသော်လည်း ၊ မတရား (လူ)ချရေးတာမလုပ်ခဲ့ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို (အရိုင်း) လို့ရေး ရဲသလို ၊ ဆိုရှယ်လစ် ကျားကြီုးဗဆွေ အကြောင်းလည်းရေးပြရဲခဲ့သူပါ။
ဤကဲ့သို့ လူကြီးကို လူငယ်လေးတွေ အထင်မမှားစေချင်တာ စာရေးသူရဲ့ စေတနာပါ။
ထို့ပြင် သေသွားသူက လာရောက်၍ ၊ မိမိကိုယ်မိမိ မကာကွယ်နိုင်တော့ပါ။
ကိုတွန်းအောင်ကျော်ဟာလည်း နံမည်ကျော် ကော်နဲ တက္ကသိုလ် (Cornell University) က ဘွဲ့ရခဲ့သူပဲ။
သို့သော် ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဆိုတာ လူတိုင်းဖြစ်တတ်ကြသည်ပဲ။
စာရေးသူလည်း တချိန်က ကွန်မြူနစ်တွေ လူလည်လုပ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး ထအော်နေတယ်လို့ တွေးခဲ့ဖူး ရုံမက ။ (ရေး) ခဲ့ဖူးပါတယ်။လီနင် ရဲ့ စာတွေကို အလေးထားဖတ်မိမှ၊ လီနင်ရဲ့စေတနာ ၊ လီနင်ရဲ့ အတွေး တွေကို နားလည်ရာက (လေးစား) လာမိတယ်။ ဒီတော့မှ (အသိ) ပြောင်းခဲ့ရတာပါ။
စာရေးသူဟာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားဆိုတာ လူတိုင်း (သိ) နိုင်လောက်ပါတယ်။ စာရေးသူဟာ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို နားလည်ဖို့ အရင်းကျမ်းတွေကို လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ တချို့ဆိုအကြိမ်ကြိမ် ဖတ်မှာနဲနဲ နားလည်တာပါ။ မာ့က်စ်တို့ လီနင်တို့ က အဲဒီလောက် ဥါဏ်သွားသူတွေပါ။ မာ့က်စ်ကော လီနင်ကိုပါ လေး စားပါတယ်။ ဖခင်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်တာမို့ ဗမာ့လွပ်လပ်ရေးသမိုင်းကိုလည်း နှစ်နဲ့ချီလေ့လာရသည်ပါ။ ဆက် လက်လေ့လာဆဲပါ။ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇော် ။ အောင်ကြီး ၊ အောင်ရွှေ ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်မြိုင် ၊ စောမြင့် ၊ လက်လမ်းမှီသမျှ လူချင်းတွေ့ မေးမြန်း စည်းပူးခဲ့ပါတယ်။
၂၁ရာစုနှစ်မှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဆိုတာ အပြစ်ခံရသော ဘိနပ်စုတ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ သုံးစားလို့ မရ တော့ပါ
နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကို လေ့လာရင် …….
၀ါဒရေးရာစာအုပ် ၊ ဆောင်းပါးတွေပဲ ဖတ်လို့မရ … ဖြစ်နိုင်ရင် (ဆွေးနွေး) ရပါမယ်။ ဆွေးနွေးရင် တဖက် သားအမြင်ကို သိခွင့်ရတာကြောင့် …. အသိစွမ်းအား..တိုးပါတယ်။ သို့သော် ဗမာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးရတာ ၊ အခက် ရှိတတ်တယ်။ ဗမာတွေက ဆွေးနွေးရင် (ငါ) ပါလာတယ်။ (ငါ) ဒါတွေဖတ်ထားတယ်၊ မင်းဘယ် လောက်တတ်လို့လဲ ဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ (မာန) တွေပါလာတယ်။ စာရေးသူကံကောင်းတာက စာရေးသူအကိုနဲ့ ဆွေးနွေးလို့ရသလို ၊ စာဖတ်ထားတဲ့ အဖြူ ကွန်မြူနစ် တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါ (ငါ) တတ်တာထက် ၊ မင်း ဘယ် လို နားလည်သလဲ ။ Interpret လုပ်သလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။စာရေးသူကံကောင်းတာက ဂျာမဏီက ပြောင်းလာတဲ့ Video Journalist က Indian Maoist အစစ် နဲ့သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ ။ India က Maoists တွေကို Indira Gandi နှိပ်ကွပ်တော့ သူက ကူခဲ့တဲ့သူ။ သူက Maoist စစ်စစ်။ စာရေးသူ က ကွန်မြူနစ် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူအဖြစ် ၀န်ခံပြီးမှ ဆွေးနွေးကြတော့ ၊ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်တွေ သိခွင့်ရ တယ်။ အပြန် အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဆွေးနွေးကြတာ။
၀ါဒရေးရာမှာတော့ ဦးကိုကိုမောင်ကြီး ဟာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်ဆုံးပဲ။ သူနဲ့ဆွေးနွေးရတာ သိပ်အကျိုး ရှိတယ်။ သူက စိတ်လည်းဝင်စားတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ရရင် ဦးဘခက်တို့ ၊ ဦးကိုကိုမောင်ကြီးတို့နဲ့ ဆွေးနွေးမိတယ်။ သူတို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းတို့ ၊ သခင်သန်းထွန်းတို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆက်ဆံလာကြတာ။
ဆရာဒဂုန်တာရာဟာလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့တဲ့ နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေပါ။ ဒါကြောင့် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူကြီးတွေ ရဲ့ စကားကိုလွယ်လွယ် မပစ်ပယ်စေချင်တာပါ။
စာရေးသူရေးတာကလည်း စာရေးသူရဲ့အမြင်ပါပဲ။ မှန်တယ်မှားတယ်ထက် မိမိအမြင်ကိုသာတင်ပြတာပါ။ (ငါ) ဆိုတဲ့ မာနမပါပါဖူး။ ပြိုင်ငြင်းဖို့လည်း မဟုတ်ရပါ။ ဥါဏ်မှီသလောက်လေး တင်ပြတာပါ။
လူငယ်လေးတွေ …. ဗဟုသုတ တိုးပွားဖို့ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါစေ
အချိန်ရရင် အောက်ပါ ဖတ်စရာလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်
State and Revolution by Lenin http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
What to be Done By Lenin http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/
Vladimir Lenin on democracy and dictatorship http://www.workersliberty.org/node/8062
Chapter 1 of The ‘Dictatorship of the Proletariat’ from Marx to Lenin, by Hal Draper, Monthly Review Press, 1987
Prisoner of the State by PM Zhao Ziyang. (တရုတ်စနစ်ကိုသိရမယ်)
Khrushchev remembers (စတာလင်အကြောင်း သိရမယ်)
Selected works of Mao tse-tung (နဲနဲလေးမယ်)
(မှတချက်။ တချို့ အင်္ဂလိပ်သကားလုံးတွေ ညှပ်ရေးလို့ ကုပြားလိုရေးတယ်လို့ပြောချင်ပြောမယ်။ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုံးအချို့ ဗမာလို ပြန်ထားတာမရှိ။ တချို့ ကလည်း မိမိနားလည် သလိုတလွဲကြီး နားလည်ကြဦးမယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးက တိကျအောင် မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုသုံးရတာပါ။ အင်တာနက်ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ရင် ကျန်ခဲ့ကြရမှာပါ။ ကြိုက်သည်ရှိ ၊ မကြိုက်သည်ရှိ အဂ်လိပ်စာဟာ ကမ္ဘာ့သုံးစကားဖြစ်နေပြီ မို့ တချို့ကို မူရင်းအင်္ဂလိက် လိုရေးပြရသည်ပါ။)
August 21, 2013 at 6:45am
ယနေ့ခေတ်ကိုသူလိုသလိုဆွဲပြီး "ဒီမိုကရေစီကွန်မြူနစ်စနစ်" လို့ပြောလိုက်တာတော့
ကွန်မြူနစ်စံနစ်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ကိုရောပြီးအတူတူလိုယောင်ဝါးသွား အောင်လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ကွန်မြူနစ်တွေက "New Democracy" ဒီမိုကရေစီသစ်" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတည်ထွင်ခဲ့ဘူးတယ်။ သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီသစ် ဆိုတာ ကသူတို့ရဲ့တပါတီကိုသာရှင်သန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီလေ၊ ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှင်သန်
အင်ဒိုနီးရှားစစ်အာဏာရှင်ဆူဟာတိုကလဲ "Guided Democracy" ထိန်းကြောင်းမှုဒီမိုကရေစီ လို့သူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့သေးတယ်။ နအဖကလဲ "Discipline Democracy" စည်းကမ်းတကျဒီမိုကရေစီ နဲ့သွားမယ်လို့ ဒီမိုကရေစီကိုသူတို့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အောက် မှာပေးမယ် လို့ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ တကယ်တန်းပြောရရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုဘာနဲ့မှရောလို့မရနိုင်ပါဘူး၊ "ဒီမိုကရေစီ" ဟာဘာမှရောစရာမလိုဘဲပြီးပြည့်စုံ တဲ့အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပြီးသားပါ။ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်တွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဘဲအမှန်တကယ်အာမခံထားတာဖြစ်တယ်။ဒီမိုကရေစီ
အခုလို Guided ဘဲပြောပြော Discipline လို့ဘဲပြောပြော၊ ဒီမိုကရေစီရဲ့ နောက် မှာ "Democracy communism" ဒီမိုကရေစီကွန်မြူနစ်စနစ် လို့ထည့်ထည့် ဒီဟာတွေဟာ ဒီမိုကရေစီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကိုယ် လိုလား တဲ့စနစ်ကိုပြည်သူကြိုက်အောင်လွတ်လပ်တရားမျှတမှုရှိသလိုလှည့်စားတာသာဖြစ်လို့ အလွန်အန္တရာယ်ကြီး ပါတယ်။ ယနေ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ မှာအခုထိ တပါတီ စနစ်နဲ့ဘဲအုပ်ချုပ်ပြီးပြည်သူမှာ အခြားရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲကွန်မြူနစ်ပါတီကိုသာရွေးချယ်နေရတာလက်ရှိ